95% ruo 98% izi ezi na ọnụ ọgụgụ ndị njem
Ọ naghị emetụta ìhè ma ọ bụ onyinyo.
Enwere ike machibido akpa agbachara na ogologo ebumnuche
Igwefoto abụọ / teknụzụ 3D akpaka counter njem
Otu-pịa Ọrụ Ntọala mgbe echichi gasịrị
Imeghe ma ọ bụ imechi ọnụ ụzọ nwere ike ịkpalite ma ọ bụ kwụsị counter.
Enwere ike ịdekọ vidiyo na MDVR (MDVR na webụsaịtị anyị)
Ọtụtụ n'ime anyị usoro ịgụta ndị njem bụ ngwaahịa ikike ikike. Iji zere mpụ, anyị etinyeghị ọtụtụ ọdịnaya na webụsaịtị. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị ka ha ziga gị ozi zuru ezu gbasara anyịusoro ịgụta ndị njem.
HP088 usoro ịgụta ndị njem bụ ngwaahịa na-agụta ndị njem dị elu (98%+) maka ọnụ ọgụgụ ndị njem ụgbọ ala na-akpaghị aka dabere na teknụzụ ọhụụ stereo binocular na teknụzụ nyocha vidiyo nwere ọgụgụ isi. Igwefoto binocular nkeusoro ịgụta ndị njem emebere ya na imewe injinia dị ka mmadụ na-anakọta ozi ngagharị njem n'ezie n'ọnụ ụzọ, wee gbakọọ ngwa ngwa 3D data nke onye njem a lekwasịrị anya site na ihe nrụpụta ihe onyonyo, gụnyere ogologo ogologo ubu onye ahụ, wdg, nke anaghị ekwekọ. ka mmadụ njiri mara akpaaka nzacha nke lekwasịrị anya ọcha (dị ka trolleys, ngwongwo, wdg) nwere ike nweta otu elu-nkenke nchọpụta n'agbanyeghị ma ọ bụ na anyanwụ ma ọ bụ na a na-adịghị ahụkebe gburugburu ebe obibi.
HP088 usoro ịgụta ndị njem nwere RS232, RS485, ụdị abụọ nke interface data, ọ na-adaba adaba na-eji usoro ndị ọzọ na-emekọrịta ihe iji ghọta mmekọrịta data.
Igwefoto binocular nke usoro ịgụta ndị njem nakweere imewe injinia anya mmadụ, igwefoto CCD abụọ arụnyere n'ime ya iji nakọta onyonyo 3D nke ebumnuche, ma na-anakọta iyi vidiyo na-eme oge na ọsọ nke okpokolo agba 25 kwa nkeji. Nkeusoro ịgụta ndị njemnwere ọrụ mgbochi ịma jijiji na ọ dabara nke ọma maka ojiji na gburugburu ụgbọ ala. Ọ nwere ike na-enwu na-akpaghị aka dabere na gburugburu ebe ike nke mgbakwunye infrared nwere ike iji ya mee ihe n'ehihie ma ọ bụ abalị.
Ihe nhazi ihe oyiyi nke usoro ịgụta ndị njem nwere eserese arụmarụ arụmarụ arụmarụ arụ ọrụ nke DSP raara onwe ya nye, nke na-ahazi ozi iyi vidiyo nke igwefoto binocular abụọ n'otu oge dị ka algọridim eserese preset, na-agbakọ ọnụ ọgụgụ ndị njem n'ezie na na n'ọnụ ụzọ abụọ. ụgbọ ala, ma soro ndị ọzọ na-ekwurịta okwu site na RS232 na RS485 interfaces Sistemu na-eduzi mgbanwe data.
Enwere ike wuo ihe nrụpụta ihe onyonyo na GGM modul (nhọrọ), nke nwere ike ghọta ọnọdụ GPS nke ụgbọ ala yana nnyefe data netwọkụ 3G \_ 4G, yabụ, usoro ịgụta ndị njem nwere ike ịmepụta nchịkọta data zuru oke, nnyefe data, ọrụ nhazi ụgbọ ala, na ntinye ngwa ngwa nke ngwa.
Nke usoro ịgụta ndị njem processor arụnyere na zoro ezo ebe n'uko nke ụgbọ ala. Ọ bụrụ na ejiri modul GGM, eriri GPS GPRS ga-edoberịrị n'ọnọdụ a na-anabata nke ọma.
Ihe onyonyo MRB akpaka ndị njem
Anyị nwere ọtụtụ ụdị IR usoro ịgụta ndị njem, 2D, 3D, AI usoro ịgụta ndị njem, a na-enwe mgbe niile nke ga-adabara gị, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-akwado ihe kachasị mma usoro ịgụta ndị njem maka gị n'ime awa 24.
Nke gara aga: MRB HPC168 igwe njem akpaka maka ụgbọ ala
Osote: MRB Mobile DVR maka ụgbọ ala
usoro ngụkọ akpaghị aka maka ụgbọ ala
Ọnụ ọgụgụ ndị njem na-akpaghị aka
usoro ịgbakọ ndị njem na-akpaghị aka maka ụgbọ ala
Ọnụọgụ ndị njem
Ọnụ ọgụgụ ndị njem
Ọnụ ọgụgụ ndị njem maka ụgbọ ala
Sensọ agụta ndị njem
Sistemụ agụta ndị njem maka ụgbọ ala
Igwefoto ụgbọ ala MRB maka ekwentị mkpanaaka DVR
MRB HPC168 igwe njem akpaka maka ụgbọ ala
MRB Mobile DVR maka ụgbọ ala